» यिनै हुन ,धादिङमा जो घाइते महिलालाइ जिउँदै खाल्डोमा पुरेर भाग्ने इस्काभेटर चालक ! को हुन त ? हेर्नुहोस यिनै हुन ,धादिङमा जो घाइते महिलालाइ जिउँदै खाल्डोमा पुरेर भाग्ने इस्काभेटर चालक ! को हुन त ? हेर्नुहोस – हाम्रो खबर
यिनै हुन ,धादिङमा जो घाइते महिलालाइ जिउँदै खाल्डोमा पुरेर भाग्ने इस्काभेटर चालक ! को हुन त ? हेर्नुहोस
काठमाडौं– धादिङको त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका खोल्सीस्थित सडकमा महिलालाई जि उँ दै खा ल्डो मा पु रेको आरोपमा प्रहरीले एक स्काभेटरका चालकलाई पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा सल्यानको छत्रेश्वरी गाउँपालिका– ६ बस्ने २२ वर्षका जीवन भन्ने भीमबहादुर बुढाथोकी रहेका प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइवी) ले जनाएको छ ।”
“काम गर्ने क्रममा स्काभेटरले ठ क्कर दि एपछि नजिकै रहेको खा’ ल्डोमा पु’रे’र भा’गे’का उनलाई कञ्चनपुरथित नेपालभारतको सीमा क्षेत्र गड्डा चौकीबाट पक्राउ गरिएको सिआइवीका निर्देशक प्रहरी नायब महानिरीक्षक सहकुलबहादुर थापाले बताउनुभयो ।”
“आज काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी उनलाई सार्वजनिक गरिएको छ । गएको फागुन १७ गते सडक मर्मत गर्ने क्रममा सोही ठाउँ बस्ने वर्ष ४० की सरस्वती कुमाललाई ठ क्क र दि एपछि जि उँ दै खो ल्डो मा हा ले र पु रि ए को थियो । स्काभेटरको सहयोगमा प्रहरी र स्थानीयले खा ल्डो बा ट उ नको श व निकालेका थिए । आ क्रो सि त स्थानीयले सोही बेला स्काभेटरसमेत ज ला ए का थिए । उक्त घटनापछि बुढाथोकी फ रा र थिए ।”
“उक्त घटनाको श्रव्यदृश्य समाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको थियो । भा गेर भारत गएकाले तत्कालै पक्राउ गर्न सकिएको थिएन । उनी एक पटक नेपालगञ्ज आएको बेलामा पिछा गरेपनि प्रहरीको हा तबा ट फु त्कि एको थापाले बताउनुभयो । त्यसपछि भा गेर भारत जाने क्रममा कञ्चनुपुरस्थित सीमा क्षेत्रबाट पक्राउ गरिएको थापाले बताउनुभयो ।”
“यो पनि, न्याय निरुपण गर्दा सिद्धान्त, व्यवहार र प्रक्रिया बुझ्नुपर्छ : गृहमन्त्री थापा”
“गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले अर्धन्यायिक निकायमा काम गर्ने अधिकारीले न्यायिक निर्णय र कानूनी प्रश्नको न्याय निरुपण गर्दा न्यायका सिद्धान्त, व्यवहार, न्यायिक प्रक्रिया एवं नजीरका बारेमा ज्ञान हुनुपर्ने बताए । राजपत्राङ्कीत प्रथम र द्वितीय श्रेणी (सहसचिव र उपसचिव) का लागि शुरु भएको कानून तथा न्यायसम्बन्धीको ९० दिने तालीममा गृहमन्त्री थापाले प्रमुख जिल्ला अधिकारीका लागि उक्त तालीम अनिवार्य रहेको बताए ।”
“सर्वोच्च अदालतले त्यस्ता अधिकारीका लागि कम्तीमा ९० दिनको न्यायसम्बन्धी तालीम लिनुपर्ने निर्देशनात्मक आदेशसमेत दिएको सन्दर्भ जोड्दै उनले यस्ता प्रशिक्षणले शान्तिसुरक्षा, सरकारी सम्पत्तिको सुरक्षा, विकास आयोजनाको अनुगमन तथा जिल्लास्थित सरकारी निकायको कार्यसम्पादन समन्वय एवं सहजीकरणका लागि सहयोगी हुने विश्वास व्यक्त गरे । उनले त्यसैका लागि तालीम आयोजना गरिएकोसमेत बताए ।”
“लोकतन्त्रको सारभूत अभ्यास नै छिटोछरितोरुपमा न्याय दिनु रहेकाले नागरिकले सहज तरिकाले विधिपूर्वक न्याय पाउनुपर्नेमा गृहमन्त्रीको जोड थियो । विभिन्न ऐन, कानूनद्वारा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई मुद्दाको कारवाही र किनारा गर्ने अर्धन्यायिक अधिकार प्रदान गरिएको छ। कार्यक्र मलाई भर्चुअल विधिबाट सम्बोधन गर्दै गृहमन्त्री थापाले समाजमा शान्तिसुरक्षा तथा अमनचयन कायम गरी सुशासनको प्रत्याभूति दिनुपर्ने र अर्धन्यायिक कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने दोहोरो भूमिकामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहेको स्मरण गरे ।”
“उनले सङ्घीय शासन प्रणालीमा नेपाल सरकारको प्रतिनिधिका रुपमा समेत प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहेकाले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयको काममा समेत तालीम सहयोगी हुने बताए । मन्त्रालय र यसअन्तर्गतका कार्यालयमा कार्यरत राजपत्राङ्कीत प्रथम र द्वितीय श्रेणीका अधिकृत कर्मचारीलाई नियमितरुपमा न्याय सेवा तालीम दिने गरिएको छ । तालीमले ज्ञान सीप र क्षमताको अभिवृद्धि गर्ने विश्वास लिइएको गृहमन्त्रीले बताउए । उनले तालीमपछि प्रजिअलाई कानूनका विषयमा जानकार गराइ न्यायिक मनको प्रयोगमार्फत व्यवस्थित प्रक्रियाबाट छिटो न्याय निरुपण गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।”